I-Apple ivuselele iphepha labucala | Ndisuka mac
Ukhuseleko lwabathengi kunye nemfihlo kubaluleke kakhulu kwiApple. Emva kwamahlazo ahlukeneyo hacks yolwazi lwabucala olufana neefoto ezisondeleyo, njl. UApple wayefuna ukumilisela kwaye achaze indawo yakhe kubucala nakukhuseleko kwizixhobo zakhe. Eyona ndlela yokwenza oku kwaye yandiswa kubo bonke abasebenzisi beApple? Qalisa iphepha labucala nokhuseleko.
Olu lutsha iphepha lokufika I-Apple inamacandelo ahlukeneyo: "Umbono wethu wemfihlo", "Lawula imfihlo zakho", "ingxelo elubala" kunye "Nomgaqo-nkqubo wethu wabucala". Kweli candelo lokugqibela, abo baseCupertino babhengeza ukuba uMgaqo-nkqubo wabo wabucala uhlaziyiwe phakathi ku-Septemba kwaye bachaza ngokweenkcukacha ezinkulu ukuba bayiphatha njani yonke ingcaciso yakho. Ngaphezu koko, iApple yenza umlinganiso wonxibelelwano ufumaneke kumthengi ukuba unemibuzo.
nayo, I-Apple iqinisekisa ukuba idatha yakho kufuneka igcinwe ngokukhuselekileyo kwisixhobo sakho kwaye akufuneki kwabelwane ngazo ngaphandle kwemvume yakho. Ngenxa yoko, bahlala besebenzisa ukubethela kwemveliso, itekhnoloji ye-smart, kunye neendlela ezinje ngemfihlo eyahlukileyo. Emva kwale ngcaciso, siya kwiinkcukacha ngazo zonke iimveliso esinokuzisebenzisa: ukusuka kwiApple Pay ukuya kwiSafari okanye kwiTouch ID.
Kwelinye icala, ayikaze ibenzakalise ukuqaqambisa konke izixhobo esinazo ukukhusela izixhobo zethu kwaye, ke, ulwazi lwethu lwabucala. Oko kukuthi: Isazisi sokuchukumisa (i-ID yobuso), isiQinisekiso seFactor ezimbini okanye usinike iingcebiso kwimibuzo yethu yokhuseleko okanye usinike idilesi ye-imeyile ukuze sikwazi ukunxibelelana nabo xa kusenzeka "ubuqhetseba".
Okokugqibela, ndikuxelele ukuba uya kuba nolwazi malunga nokuba yonke idatha iqhutywa njani kwicandelo leMfundo. Kwaye I-Apple iziphatha njani izicelo zikarhulumente okanye izicelo ezivela kwiinkampani zabucala. Imodus operandi yayo icaciswe kakuhle kuwo omabini la matyala. Le ntshukumo ye-Apple inokuphindaphindwa zizo zonke iinkampani zetekhnoloji kwaye yenze kucace kumsebenzisi ukuba yintoni eyenziwayo ngedatha yabo yabucala ngalo lonke ixesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ihlaziya iphepha labo labucala
Yongeza imixholo engezantsi kwiividiyo zakho ngeVidiyo engeza imixholo engezantsi